Donald Trump oo lagu eedeeyay "hurinta kacdoon iyo faafinta been abuur"
Trump oo lagu eedeeyay "hurinta kacdoon iyo faafinta been abuur"
Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhaleeceyn kala kulmay fariin uu soo dhigay boggiisa Twitter-ka.
WASHINGTON, US – Barasaabka gobolka Washington, Jay Inslee oo qoraal soo dhigay Twitter-ka, ayaa madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ku eedeeyay "dhiiragelinta kacdoon iyo faafinta been abuur".
Eedeynta ayaa ka dambeysay markii Trump uu ka codsadey taageereyaashiisa in ay "xorreeyaan" saddex gobol oo ay madax ka yihiin gudoomiyeyaal ka tirsan xisbiga uu loolanka kala dhaxeeyo ee dimuqraadiga.
Hadalka Trump ayaa u muuqdey mid uu ku karaar-siinayey banaanbaxyadda ka socda gobolada Minnesota, Michigan iyo Virginia.
"War-saxaafadeedka madaxweynaha ee subaxaan wuxuu dhiiragelinayaa sharci darro iyo talaabooyin halis ah. Nolosha malaayiin dad ah ayuu halis u gelinayaain ay qaadaan Covid-19," ayuu Jimcadii soo qoray.
Ismaamulada aan soo xusnay waxay lagu soo rogay go'aan ah in dadku joogaan guriyahooda cabsida Coronavirus darteed, balse waxaa ka dhacay mudaaharaadyo lagu dalbanayo in la qaado.
Khuburada caafimaadka ayaa ka digay in hadii la dabciyo go'aanadaas ay xaaladda kasii dari karto, iyagoo soo jeediyey in la xoojiyo ka hortaga.
Kiisaska fayruska safmareenka ah ee gudaha Mareykanka ayaa kor-u-dhaafaya 700-kun oo ruux, waxaana dhimashadda ay ka badan tahay 36-kun; baqdinta laga qabo in ay intaas kasii baataan aad bey u sareysaa.
Trump oo bilaabay ololihiisii doorashada Mareykanka ee 2020-ka
Caalamka 19.06.2019. 08:58
Isu soo bax ay dad badan kasoo qeybgaleen ayuu kaga dhawaaqey musharaxnimadiisa.
Canshuurtii Trump ee China oo dhaqan gashay
Caalamka 06.07.2018. 15:28
Trump oo codsi ka dhan ah Iran u diray dalalka "ugu tunka weyn" dunida
Caalamka 08.01.2020. 20:00
Soomaaliya oo taageero waydiistay dal ku biiray Golaha Ammaanka UN-ka
Soomaliya 24.09.2019. 06:47
Trump oo saxiixay amar fulineed oo saameynaya Soomaaliya
Soomaliya 14.04.2019. 07:17
Interpol oo ka jawaabtay codsiga Iiraan ee qabashada Donald Trump
Caalamka 30.06.2020. 18:00